Alexander García-Tobar's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Alexander García-Tobar
Mumwe muzvinabhizimusi uye mukuru wepasi rose, Alexander anga ari CEO pamafemu maviri apfuura uye akamhanyisa zvikwata zvekutengesa zvepasi rose zvemakambani matatu akaenda IPO. Akabata muongorori uye zvinzvimbo zvepamusoro kumakambani anotungamira ekutsvagisa akadai seThe Boston Consulting Group neForrester Research pamwe chete neSilicon Valley yekutanga seValiCert, Sygate, uye SyncTV.
Nei Kushambadzira uye IT Matimu Achifanira Kugovera Cybersecurity Mabasa
Chishanu, January 21, 2022 Chishanu, January 21, 2022 Alexander García-Tobar
Denda iri rakawedzera kudiwa kwedhipatimendi rega rega mukati mesangano kubhadhara zvakanyanya kune cybersecurity. Izvozvo zvine musoro, handiti? Iyo yakawanda tekinoroji yatinoshandisa mumaitiro edu uye basa rezuva nezuva, ndipo panogona kunyanya kuve panjodzi yekutyorwa. Asi kugamuchirwa kwemaitiro ari nani ekuchengetedza cybersecurity kunofanirwa kutanga nezvikwata zvekushambadzira zvine ruzivo. Cybersecurity yagara iri hanya nevatungamiriri veRuzivo Technology (IT), Chief Information Security Officers (CISO) uye Chief Technology Officers (CTO)